Ndị Ikpe 7 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Ikpe 7:1-25
7 Jerọbel,+ ya bụ, Gidiọn,+ ya na ndị niile so ya, wee bilie n’isi ụtụtụ gaa maa ụlọikwuu n’olulu mmiri Herọd; n’ebe ọ nọ, ụlọikwuu ndị Midian dị n’ebe ugwu, n’ugwu nta More, na ndagwurugwu.
2 Jehova wee sị Gidiọn: “Ndị gị na ha so karịrị akarị nke na agaghị m enyefe Midian n’aka ha.+ Ikekwe, Izrel ga-eji ya nyaara m isi,+ sị, ‘Ọ bụ aka m zọpụtara m.’+
3 Biko, kwuo ná ntị ndị Izrel, sị, ‘Ọ̀ dị onye ụjọ na-atụ, nke na-amakwa jijiji? Ya lawa.’”+ Gidiọn wee lee ha ule. Puku mmadụ iri abụọ na abụọ n’ime ha wee laa, o wee fọdụ puku mmadụ iri.
4 Ma Jehova sịrị Gidiọn: “Mmadụ ka karịrị akarị.+ Mee ka ha gbadaa na mmiri ka m leere gị ha ule n’ebe ahụ. Ọ ga-erukwa na onye ọ bụla m ga-asị gị, ‘Onye a ga-eso gị,’ ọ bụ ya ga-eso gị, ma onye ọ bụla m ga-asị gị, ‘Onye a agaghị eso gị,’ ọ gaghị eso gị.”
5 O wee mee ka ndị ahụ gbadaa na mmiri.+
Jehova wee sị Gidiọn: “Onye ọ bụla nke ji ire na-arara mmiri otú nkịta si ara, doo ya iche, dookwa onye ọ bụla nke na-egbu ikpere n’ala na-aṅụ mmiri iche.”+
6 Ndị ji aka ha kwọrọ mmiri ṅụọ dị narị ndị ikom atọ. Ma ndị ọzọ niile gburu ikpere ha n’ala ṅụọ mmiri.
7 Jehova wee sị Gidiọn: “M ga-eji narị ndị ikom atọ ahụ kwọọrọ mmiri ṅụọ zọpụta unu, m ga-enyefekwa ndị Midian n’aka gị.+ Ka ndị ọzọ niile laa, onye nke ọ bụla, n’ebe obibi ya.”
8 Ha wee nara ndị ahụ ihe oriri ha ji, narakwa ha opi ha,+ o wee gwa ndị ikom Izrel ka onye ọ bụla n’ime ha laa n’ebe obibi ya; ọ kpọkwaara narị ndị ikom atọ ahụ. Ma n’ebe ọ nọ, ụlọikwuu ndị Midia dị ná mgbada mgbada, na ndagwurugwu.+
9 O wee ruo n’abalị+ ahụ na Jehova sịrị ya: “Bilie, gbadaa buso ndị agha ahụ agha, n’ihi na enyefewo m ha n’aka gị.+
10 Ma ọ bụrụ na ị na-atụ egwu ịgbada, gị na Pura onye na-ejere gị ozi gbadaa n’ebe ahụ ha mara ụlọikwuu.+
11 Gee ntị n’ihe ha ga-ekwu,+ e mesịa, aka gị ga-adị ike,+ ị ga-agbadakwa buso ndị agha ahụ agha.” Ya na Pura onye na-ejere ya ozi wee gbadaruo n’ọnụ ọnụ ebe ndị ahụ haziri onwe ha ibu agha nọ, bụ́ ndị nọ n’ụlọikwuu.
12 Ndị Midian na ndị Amalek na ndị niile si n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ+ jupụtara na ndagwurugwu ahụ dị ka igurube;+ kamel ha+ enweghị ngụta, ha dị ọtụtụ dị ka ájá dị n’ụsọ oké osimiri.
13 Gidiọn wee bịarute, ma, lee! otu nwoke nọ na-akọrọ ibe ya nrọ ọ rọrọ, sị: “Nke a bụ nrọ m rọrọ.+ Lee! e nwere achịcha ọka bali dị okirikiri nke kpọreere banye n’ebe ndị Midian mara ụlọikwuu. O wee rute n’otu ụlọikwuu, kụọ ya, o wee daa,+ o wee kpuo ụlọikwuu ahụ ihu n’ala, o wee daruo ala.”
14 Onye ibe ya wee zaa,+ sị: “Ihe a abụghị ihe ọzọ ma ọ́ bụghị mma agha Gidiọn+ nwa Joash, onye Izrel. Ezi Chineke+ enyefewo Midian na ndị agha ya niile n’aka ya.”+
15 O wee ruo na ozugbo Gidiọn nụrụ nrọ ahụ a kọrọ na nkọwa ya,+ ọ kpọrọ isiala.+ E mesịa, ọ laghachiri n’ebe ndị Izrel mara ụlọikwuu wee sị: “Bilienụ,+ n’ihi na Jehova enyefewo ndị agha Midian n’aka unu.”
16 O wee kee narị ndị ikom atọ ahụ ụzọ atọ, nye ha niile opi+ na nnukwu ite ihe na-adịghị, nakwa ọwa ọkụ ndị e tinyere n’ime nnukwu ite ndị ahụ.
17 O wee gaa n’ihu ịsị ha: “Mụtanụ ihe site n’ile m anya, ọ bụkwa otú ahụ ka unu ga-eme. Mgbe ọ bụla m bịara ụlọikwuu ahụ nso, ọ ga-erukwa na otú ọ bụla m ga-eme, otú ahụ ka unu ga-eme.
18 Mgbe m fụrụ opi, mụ na ndị mụ na ha so, fụọkwanụ opi unu gburugburu ebe ndị ahụ mara ụlọikwuu,+ sịkwanụ, ‘Ọ bụ nke Jehova+ na nke Gidiọn!’”
19 Ka oge na-aga, Gidiọn kpọ otu narị ndị ikom ya na ha so rute n’ọnụ ọnụ ebe ndị ahụ mara ụlọikwuu ná mmalite oge nche nke etiti abalị.+ Ha ka debesịrị ndị nche n’ebe ha ga-anọ. Ha wee fụọ opi ha,+ kụriekwa nnukwu ite mmiri ndị ahụ ha bu.+
20 Ìgwè atọ ahụ wee fụọ opi ha+ ma kụrie nnukwu ite ha, werezie aka ekpe ha jide ọwa ọkụ ha, jide opi ha n’aka nri ha ka ha fụọ ha, ha wee malite iti mkpu, sị: “Mma agha Jehova+ na nke Gidiọn!”
21 N’oge ahụ, onye nke ọ bụla guzo n’ebe o guzo gburugburu ebe ndị ahụ mara ụlọikwuu, ndị agha ahụ niile wee gbawa ọsọ, na-eti mkpu ma na-agba ọsọ.+
22 Narị ndị agha atọ ahụ+ wee na-afụ opi ha,+ Jehova wee mee ka mma agha onye agha nke ọ bụla na-egbu onye agha ibe ya;+ ndị agha ahụ niile wee gbagide ọsọ ruo Bet-shita, ruo Zerira, ruokwa mpụga Ebel-mehola,+ n’akụkụ Tabat.
23 N’ime oge a, e si na Naftalaị+ na Asha+ na Manase+ dum kpọkọta ndị Izrel, ha wee chụwa+ ndị Midian.
24 Gidiọn wee zipụ ndị ozi ka ha gaa n’ógbè Ifrem bụ́ ugwu ugwu,+ sị: “Gbadaanụ buso ndị Midian agha, wegharakwanụ mmiri ha ruo Bet-bara, tinyere Jọdan, tupu ha eruo ebe ahụ.” E wee kpọkọta ndị Ifrem niile, ha wee weghara mmiri ndị ahụ+ ruo Bet-bara, tinyere Jọdan.
25 Ha jidekwara ndị isi abụọ nke Midian, ya bụ, Oreb na Zieb;+ ha wee gbuo Oreb n’elu oké nkume Oreb,+ ha gbukwara Zieb n’olulu nzọchapụta mmanya nke Zieb. Ha wee chụrụ ndị Midian+ na-aga, ha wee butere Gidiọn isi Oreb na isi Zieb n’ógbè Jọdan.+
Ndị Ikpe 7
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D7%26Chapter%3D7%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl